Mogadishu Journal » Kenya oo sheegtay in ay kordhineyso duqeymaha cirka oo ay ku beegsaneyso Al-shabaab
Mjournal : –Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay sii wadi doonto duqeymaha dhinaca cirka ah oo ay ku bartilmaameedsaneyso kooxda Al-shabaab ee xiriirka la leh urur weynaha Al-Qaacid.
War ay soo saareen saraakiisha militariga dowladda Kenya waxaa lagu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Kenya weeraro duqeymaaha ah ka geysteen maalintii shalay degmada Diinsoor gobolka Bay.
Cyrus Oguna oo ah afhayeenka militariga dowladda Kenya oo la hadlay wakaalada Wararka Reuters ayaa sheegay in ciidankooda cirku ay weerar ku qaadeen xarun weyn oo Al-shabaab ay ku lahaayeen degmada Diinsoor.
‘’Weerarkan aan ku qaaday degmada Diinsoor waxaa ku beegsanay xarumo iyo saldhigyo ay daganaayeen Al-shabaab, qaarkoodna lagu tababari jiray maleeshiyaadka kooxda, ‘’ ayuu yiri Cyrus Oguna.
Waxaa uu intaa ku darray in y sii xoojin doonaan duqaymaha cirka ah ee ay ka geysanayaan deegaanada ay ku xooggan yihiin Al-shabaab,wuxuuna intaa raaciyey iney khasaaro lixaad leh Al-shabaab ku gaarsiiyeen duqaynta uu sheegay iney shalay dayaaradahooda dagaalku ka geysteen degmada Diinsoor.
Kooxda Al-shabaab ayaa bishii hore ee September sheegtay mas’uuliyada weerarkii lagu qaaday dhismaha ganacsiga Westgate Mall ee magaalada Nairobi, kasoo ay ku dhinteen in ka badan 67 ruux oo u badnaa dad rayid ah.
Laakiin marka aad dhinaca kale eegto saraakiisha Al-shabaab ayaa dhinacooda waxba kama jiraan ku sheegashada militariga dalka Kenya ee ah duqeymo ka geysteen saldhigyo ay lahaayeen Al-shabaab.